Problem laws ပြသနာရှိသော ဥပဒေများ – Free Expression Myanmar
FEM has analysed Myanmar laws to see violations of freedom of expression. လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ထိပါးချိုးဖောက်နေခြင်းများအား သိမြင်နားလည်ရန် FEM မှ မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေများကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ဖြစ်သည်။
FEM has also analysed proposed Bills to see violations of freedom of expression. မကြာမှီလာမည်!
Find out more about the right to freedom of expression >